Miarahaba an'i Etazonia ireo mpizahatany amerikana ny Alahady 20 Jona izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Miarahaba an'i Etazonia ireo mpizahatany amerikana ny Alahady 20 Jona izao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Miarahaba ny Amerikanina i Alemana
Misy vaovao tsara ho an'ireo mpandeha amerikana avy ao amin'ny Office National Tourist Office. Manomboka amin'ity alahady 20 jona 2021 ity dia afaka mandeha any Alemana indray ny mpandeha avy any Etazonia.
Namoaka fanambarana ofisialy ny 18 Jona 2021 ny biraon'ny fizahantany nasionalista alemanina.
Ny governemanta alemanina dia manafoana ny fetra fitsangatsanganana rehetra ho an'ireo olona monina any Etazonia, manomboka ny alahady 20 jona 2021.
Ny fitsangatsanganana any Alemana amin'ny tanjona rehetra dia avela indray miaraka amin'ny porofon'ny vaksiny, porofon'ny fanarenana avy amin'ny COVID-19, na ny valin'ny fitsapana ratsy.
Miorina amin'ny tolo-kevitry ny filankevitry ny vondrona eropeana dia nampihatra sy nanavao ny fameperana fidirana i Alemana nanomboka ny 20 Jona 2021, mamela ny fidirana tsy voafetra ho an'ny mponina ao Etazonia miaraka amin'ireo firenena manaraka: Albania, Hong Kong, Lebanon, Macao, Makedonia Avaratra, Serbia, ary Taiwan.
Talohan'izay dia nisy ny fitsangatsanganana tsy voafetra nomena an'i: Aostralia, Israel, Japon, Nouvelle Zélande, Singapore, Korea atsimo, ary Thailand. Hitarina ny lisitra mba hampidirana an'i Sina raha vantany vao voamarina ny fahafahan'ny roa tonta miditra.
Rehefa mandeha any Alemaina, ny vava sy ny oron'ny mpitsidika dia tsy maintsy rakofana ao anaty fitateram-bahoaka, any amin'ny magazay, ary amin'ny toerana be olona any ivelany izay tsy azo tazonina ny elanelan'ny farany ambany amin'ny fotoana rehetra. Ny sarontava dia tsy maintsy mameno ny fepetra takian'ny FFP2 na KN95 / N95.
Raha manana soritr'aretina mifandraika amin'izany ny mpandeha Covid-19 (mikohaka, orona mandriaka, marary tenda, na tazo) izy ireo dia tokony hifandray an-telefaona amin'ny dokotera na hifandray amin'ny laharana finday 116 117. Matetika, ireo mpitari-dia na hotely dia afaka manampy amin'ny tranga toy izany. Ny mpitsangatsangana dia tokony hitazona ny antsipirian'ny fifandraisana amin'ny masoivoho any an-tanindrazany na ny kaonsily any Alemana raha toa ka mila mifandray amin'izy ireo.
Ny fandraràna ny dia dia napetraka ho an'ireo firenena manana fisehoan-javatra marobe momba ny viriosy SARS-CoV-2 (antsoina hoe faritra misy ahiahy). Ny orinasam-pitaterana, ohatra ny mpitatitra fiaramanidina sy orinasan-dalamby dia tsy mahazo mitondra olona avy amin'ireo firenena ireo mankany Alemana. Misy vitsivitsy ihany, fanilihana voafaritra mazava momba ity fandrarana ny fivezivezena ity, dia ny: olom-pirenena Alemanina sy olona monina ao Alemana izay manan-jo hipetraka ao amin'ny firenena, ary koa ny vady, mpiara-miasa monina ao amin'ny tokantrano iray sy zaza tsy ampy taona zaza; olona misambotra sidina mampifandray izay tsy miala amin'ny faritra fandehanan'ny seranam-piaramanidina mpandeha; ary tranga vitsivitsy hafa manokana.